बैंकिङ रोजगारी Archives ~ Page3of 33 ~ Banking Khabar
राष्ट्र बैंकमा रोजगारीको अवसर : प्लस टु उतीर्णले पनि एप्लाई गर्न पाउने
बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७ जना कर्मचारी मागेको छ । २८ जना सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय), ८ जना लेखा वा लेखापरीक्षणका लागि सहायक निर्देशक (अधिकृत तृतीय) र ३१ जना सहायक (सहायक द्धितीय) मागिएको छ । केके चाहिन्छ योग्यता ? सहायक निर्देशकका लागि मेनेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ ।
दुई वित्तीय संस्थामा रोजगारीको अवसर, ट्रेनीको पनि माग
बैंकिङ खबर । कामना सेवा विकास बैंक र श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सले कर्मचारीको माग गरेका छन् । कामना सेवा विकास बैंकले एक जना इन्फर्मेसन सेक्युरिटी अफिसर, आईटी डिपार्टका लागि एक जना विजनेस इन्टेलिजेन्स स्पेसियलिस्ट र लिगल डिपार्टका लागि केही संख्यामा सिनियर एसिस्टेन्टदेखि अफिसर लेभलसम्मका कर्मचारी मागेको छ । आवेदन दिने म्याद ६ नोभेम्बरसम्म छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले माग्यो ११५ जना कर्मचारी
स्मारीका अग्रवाल । बैंकिङ खबर । माछापुच्छ्रे बैंकले भारी संख्यामा कर्मचारीको माग गरेको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट ट्रेनी र ट्रेनी जुनियर असिस्टेन्ट गरी ११५ जना कर्मचारीको लागि आवेदन खुल्ला गरेको हो । बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्र र बाहिरको लागि २५ जना म्यानेजमेन्ट ट्रेनी र ९० जना जुनियर एसिटेन्ट पदको लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ ।
ज्योति विकास बैंकमा रोजगारीको अवसर नयाँ कर्मचारीलाई समेत मौका
स्मारीका अग्रवाल । बैंकिङ खबर । ज्योति विकास बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र र बाहिर गरेर विभिन्न पदमा ५० जना कर्मचारीका लागि आवेदन खुलाएको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट लेवल र जुनियर असिस्टेन्ट तहमा कर्मचारीको माग गरेको हो । यसको अन्तिम म्याद भने कात्तिक १३ गते बुधबारसम्म रहेको छ । बैंकले म्यानेजमेन्ट र जुनियर असिस्टेन्ट तहमा नयाँ कर्मचारीलाई
बैंकिङ रोजगारीका लागि केके कुरामा ध्यान दिने ?
बैंकिङ खबर । बैंकमा जागीर खाने रहर धेरैलाई हुन्छ । धेरैले भ्याकेन्सी खुलेको समयमा एप्लाई पनि गर्छन् । तर, बैंकमा जागीर खान आवश्यक तयारी नपुग्दा धेरै जसो आवेदक फालिन्छन् । बैंकमा जागीर गर्नका लागि मेनेजमेन्ट अध्ययन गरेर मात्रै पुग्दैन । अन्य थुप्रै ज्ञानहरुको आवश्यकता पर्दछ । हुन त कतिपय बैंकले लिखित परीक्षामा सोध्न सकिने प्रश्नहरुका
बैंकिङ करिअर बनाउन चाहनेहरुलाई अवसरै अवसर : कुनकुन बैंकमा छ भ्याकेन्सी ?
बैंकिङ खबर । लुम्बिनी विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले भ्याकेन्सी खुलाएका छन् । साना किसान लघुवित्तले नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मागेको छ । यसका लागि संस्थाले कात्तिक १२ गतेभित्र आवेदन गर्न आह्वान गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले जुनियर एसिस्टेन्टदेखि एसिस्टेन्ट मेनेजरसम्मका पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ ।
नेपाल बैंकले माग्यो ५६३ जना कर्मचारी
बैंकिङ खबर । नेपाल बैंकले विभिन्न पदमा ५६३ जना कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले छैठौ तहको सहायक प्रवन्धक पदका लागि १२६ जना कर्मचारी माग गरेको हो। यसै पदका लागि १० जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि मागेको छ भने केन्द्रीय कार्यालयका लागि सूचना प्रविधि शाखामा सहायक माग गरेको छ । छैठौँ तहका लागि कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर
बैंकिङ खबर । वित्तीय क्षेत्रमा रोजगारीको प्रशस्त अवसर खुलेको छ । बैंक, विकास बैंक, लघुवित्त, फाइनान्स र सहकारी गरी ८ वटा संस्थाले भ्याकेन्सी खुलाएका छन् । सबैमा गरेर दुई सयभन्दा बढी रोजगारीको अवसर छ । नविल बैंकले ५० जना ट्रेनी एसिस्टेन्ट र १० जना मेनेजमेन्ट ट्रेनी मागेको छ । अनुभव नभएका कर्मचारीको माग भएकाले सुरुमा
बैंकका कर्मचारीमा हुनुपर्ने न्यूनतम नलेज
बैंकिङ खबर । नेपालमा मेनेजमेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरुको संख्या अत्याधिक छ । तीमध्ये, प्रायःको टार्गेट बैंकिङ रोजगारी हुने गरेको छ । हुन त मेनेजमेन्ट अध्ययनको स्कोप निकै फराकिलो छ । तर, बैंकिङ रोजगारीको छुट्टै आकर्षण छ । बैंकहरुलाई योग्य कर्मचारी चाहिएको छ भने विद्यार्थीहरुलाई जागीर चाहिएको छ । तर, पनि बैंकहरु राम्रो कर्मचारी नपाएको गुनासो गरिरहेका
मेनेजमेन्ट स्टुडेन्टलाई सरकारी जागीर : निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा भ्याकेन्सी
बैंकिङ खबर । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले १२ जना कर्मचारी मागेको छ । चार जना अधिकृत, पाँच जना सहायक अधिकृत र तीन जना कम्प्युटर सहायक मागिएको छ । आवश्यक योग्यता लोकसेवा आयोगले पूर्तिक गर्ने यी पदहरुमध्ये, अधिकृतका लागि व्यवस्थापन संकायमतर्फबाट स्नातकोत्तर प्रथम श्रेणीमा उतीर्ण गरी दुई वर्षको अनुभव मागिएको छ भने सहायक अधिकृतका लागि
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकमा जागीरे बन्ने मौकाः ज्योति र लुम्बिनीमा भ्याकेन्सी
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरु लुम्बिनी विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकले भ्याकेन्सी खुलाएका छन् । ज्योतिले कर्पोरेट अफिसका लागि २० जना अफिसर, उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि १२ जना शाखा प्रबन्धक, १५ जना रिलेसनसिप मेनेजर वा अपरेसन इन्चार्ज, आठ जना कम्प्लायन्स वा इन्टरनल अडिट एसिस्टेन्ट र पाँच जना चार्टर्ड उकाउन्टेन्ट गरी ६० जना
नेपाल बैंकले छिटै नयाँ सीईओ पाउँदै
बैंकिङ खबर । नेपालको सबैभन्दा जेठो बैंक नेपाल बेंकले छिटै नयाँ सीईओ पाउने भएको छ । गत चैतदेखि रिक्त रहेको नेपाल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि १४ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा एक जना महिला र १३ जना पुरुष छन् । बैंकमा सीईओका लागि एप्लाई गर्ने एक मात्र महिला दुर्गाकुमारी कर्णेल
बैंकमा जागीर गर्ने हैन ? हेर्नुहोस्, कुनकुन बैंकको छ भ्याकेन्सी ?
बैंकिङ खबर । बैंकमा जागीर गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यतिबेला सुनौलो अवसर छ । थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ठूलो संख्यामा कर्मचारीको माग गरिरहेका छन् । आफ्नो इच्छा र योग्यताअनुसारको जागीर खाने अवसर तपाईँलाई पर्खिरहेको छ । गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एप्लाई गर्ने म्याद आइतबार सकिँदैछ । संस्थाले ट्रेनी एसिस्टेन्टदेखि एसिस्टेन्ट मेनेजरसम्मका विभिन्न
बैंकमा जागीर खाने इच्छा छ ? केके कुरामा ध्यान दिने ?
बैंकिङ खबर । वित्तीय संस्थामा आउने कर्मचारी भनेको मेनेजमेन्ट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु हुन् । तर, किताबी ज्ञानले मात्रै हुँदैन । अहिलेका विद्यार्थीहरुमा इनर्जी छैन । बैंकको सिस्टम मात्रै जानेको भरमा इगो लिएर बसेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरुले बैंकमा जोखिम सिर्जना गर्न सक्ने भएकाले बैंकहरु कर्मचारी छनौटमा एकदमै संयम् हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम
बैंकिङ खबर । सिद्धार्थ बैंकले विभिन्न पदमा कर्मचारी मागेको छ । बैंकले नाम्चेका लागि अफिसर वा सिनियर अफिसर लेभलको शाखा प्रबन्धक, क्रेडिट डिपार्टका लागि जुनियर अफिसर वा सिनियर एसिस्टेन्ट र अपरेसन डिपार्टका लागि सिनियर एसिस्टेन्ट मागेको हो । आवेदन दिने म्याद सेप्टेम्बर ३ सम्म छ । बैंकको वेभसाइट (http://202.166.220.238:88/vacancy.aspx) मा गएर अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ ।
बैंकिङ जोखिमका कारणहरु र व्यवस्थापनका उपायहरु
पुनरकर्जा : लिने बिधि र आवश्यक प्रक्रिया
युथ एण्ड बैंकिङ : मेरो अनुभव, बैंकिङमा एक दशक
बैंकिङ परीक्षाको तयारी गर्दा बुझ्नुपर्ने १२ बुँदा
गरिमा विकास बैंकका ग्राहकलाई ग्यालेक्सी हस्पिटलमा उपचार गर्दा छुट हुने
टाटा ब्राण्डका कार एन आई सी एशिया मार्फत खरिद गर्दा ६ महिनाको किस्ता तिर्नुनपर्ने
जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्तद्वारा मृतकको परिवारलाई कर्जा मिनाहा